GTMSMART Oomatshini Co., Ltd.lishishini eliphezulu-lobuchwephesha elidibanisa i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanyaOluzenzekelayo Thermoforming Machine kwaye Umatshini wePlastiki weThermoforming Machine, Inaliti Ukubumbela Machine, Umshini wokwenza i-PVC Umshini, EVA koomatshini yokubumba inaliti njl
Full Servo Plastic Cup Ukwenza Ma ...
Umatshini wokwenza ikomityi yokwenza Umatshini wokwenza indebe ubukhulu becala usetyenziselwa ikomityi yokusela ikomityi yobisi, indebe yejeli kunye nezinye iimveliso zeplastiki, njl isebenza ngombane-womntu, onokusebenza ...
PLC oluzenzekelayo PP PVC zeplastiki Vac ...
Umshini we-Thermoplastic Umatshini wokwenza i-Vacuum Description
Ngesanti kubunzulu baphantsi Servo Plastic Cup Ther ...
Iservo esolulayo isebenzisa inkqubo ye-hydraulic kunye nolawulo lwetekhnoloji yombane. Ngumatshini wexabiso eliphezulu oveliswe kwisiseko kwiimfuno zentengiso yabathengi. Umatshini wonke ulawulwa ...
Zenzekelayo Umshini Ndiyila Machine ...
Isicelo Lo Matshini Owenza Umatshini ubukhulu becala usetyenziselwa ukwenza iitreyi zembewu yezolimo, zonke iintlobo zokutya kunye neephakheji yezixhobo.
IPhepha lePhepha lePhepha eliPhakathi liyila ...
Ingcaciso yeMveliso Umatshini wokwenza ipleyiti yephepha u-HEY17 uyilelwe ngokusekwe kwimfuno yeemarike idibanise i-pneumatic kunye neetekhnoloji zobuchwephesha, esikhawulezisa ngokukhawuleza, ukhuseleko oluninzi ...
Oluzenzekelayo Paper Bowl Ukwenza Mach ...
PE PE Camera Camera Iphepha Cup
Iikomityi zephepha lesicelo eziveliswe yi-HEY18A umatshini omnye wendebe yepeyinti enokusetyenziselwa iti, ikofu, ubisi, i-ayisi khrim, ijusi kunye namanzi. Iimpawu sisixhobo esifanelekileyo sokuvelisa i-single-s ...